Sanbaloolshe: Waxaa laygu amray in ay soo xiro Xaaf balse waan diidey - Worldnews.com
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Sanbaloolshe, ayaa shaaca ka qaadey in mudadii uu xilka u hayey Nabad iyo Nolol lagu amray in uu soo xiro Axmed Ducaale Geelle [Xaaf].
Sanbaloolshe oo la hadlay Dalsan Tv ayaanan soo bandhigin cidda ku amartay iyo taariikhda la siiyey amarkaas,
"Sidoo kale, waxaa laygu amray in ay soo xiro siyaasiyiin badan oo mucaarad ah balse dhamaan waan diidey,"
"Mukulaalka" kamid ah hogaanka DF ee ku fekerka ah Axmed Godane
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Sanbaloolshe, ayaa weerar afka ah ku qaadey saddex ruux oo uu ku sheegay "in ay liijaanka u...
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Sanbaloolshe, ayaa dhaliilay "aqoonsiga" uu Mareykanka "kula degdegay" doorashadii dowladda ku...
GAALKACYO, Galmudug – Axmed Ducaale Geelle Xaaf, "madaxweynaha" maamulka Galmudug, ayaa wuxuu meesha ka saarey in dabka ka kacay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya "uu ka dhashay...
Gareowe Online 2020-02-04
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubaland ayaa markale ka hadlay sidii lagu xiray, cidii ka dambeysay inuu mudo 5 bilood ah xirnaado iyo arrimo kale oo ku saabsan qaabkii uu kusoo baxsaday. Janan ayaa daboolka ka qaadey in xarigiisa ay ka dambeeyeen Fahad Yaasiin, taliyaha NISA, C/llaahi Kulane oo isna katirsan saraakiisha NISA iyo Saadaq John,...
NISA oo cambaareyn kala kulantay warkii "xilka ka qaadista Al-Shabaab"
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa cambaareyn kala dul-dhacay Hay'adda Sirdoonka markii ay faafisay war ku saabsan xil ka qaadis ay sameysay Al-Shabaab. NISA ayaa 3-dii Janaayo, 2020 baahisay in Amiirka Al-Shabaab, Axmed Diiriye uu eryay Mahad Karataay iyo Bashiir Qoorgoob kana saarey Golaha Fulinta isla markaana uu ka xayuubiyey...
"Forex waa sida Coronavirus oo la rabo in lagu baabi\_'iyo dhaqaalaha dalka"
MUQDISHO, Soomaaliya – Iyaddoo dadka ku nool Muqdisho ay aad ugu hoobteen sarifka lacagaha qalaad ee Forex, waxaa isa soo taraya digniinaha khatarta ah ee ay ka bixinayaan siyaasiyiinta. Xildhibaano iyo dad horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in mashruucaan uu siyaasadeysan yahay. Qaarkood oo uu kamid yahay Cabdullaahi Sanbaloolshe ayaa rumeysan in Villa...
Jubaland oo shaacisay "cidda fududeysay" baxsashada wasiir Janan
KISMAAYO, Jubaland – Dowlad goboleedka Jubaland ayaa markii ugu horeysay si furan uga waramay macluumaadyo kooban oo ku saabsan baxsashada Wasiirka Amniga maamulkaas, Cabdirashiid Janan. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Jubaland, oo u waramay idaacada Kulmiye ee Muqdisho, ayaa daboolka ka qaadey "in ay fududeeyeen" dhinacyo kala duwan. Wallow uu...
DHUUSAMAREEB, Galmudug – Hogaamiyaha ururka Ahlu Sunna Waljameeca, Sheekh Macalin Maxamuud Xasan, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib isu hubeynayaan xili khilaaf xoogan uu taagan yahay. Is-qabqabsiga ayaa ka jira doorashada madaxweynaha Galmudug oo ay isku haystaan dowladda, Ahlu Sunna iyo Axmed Ducaale Geelle [Xaaf], oo maamul ka dhistay koonfurta Gaalkacyo. Inkastoo...
Wakhtigii waxbarashada ilaa markii la xiray sannadkii 1982dii ka dib afgambigii dhicisoobay ee ka dhanka ahaa madaxweynihihii hore ee Kenya Daniel arap Moi, Odinga oo 72 jir ah ayaan wali waxyaabo badan laga ogayn dhinacyada qaar. Wiilkan uu dhalay madaxweyne ku xigeenkii koobaad ee dalka Kenya Jaramogi Oginga Odinga, ayaa markii afraad u tartamaya madaxweynenimada Kenya...